क्यानले ४ जनालाई किन गर्यो कारवाही ? यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित — Imandarmedia.com
क्यानले ४ जनालाई किन गर्यो कारवाही ? यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित
काठमाडौँ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले नियमित कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान बनाउने निर्णय गरेको छ।
क्यानले ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्रसहित सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई कारबाहीस्वरूप सन् २०२२ को सेन्ट्रल कन्ट्रयाकबाट ६ महिना बाहिर राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघको अनुशासन उल्लंघनसमबन्धी गठन गरेको।
छानबिन समितिले गरेको सिफारिसबमोजिम खेलाडी आचारसंहिताको उल्लंघनमा चार खेलाडी कारबाहीमा परेको क्यानमा कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्‍लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
केही महिनाअघि क्यानले २०२१ को ग्रेड सार्वजनिक गर्न नसकेर २०२० को ग्रेडलाई आधार मानेर सुरुवाती ६ महिना तलब दियो। बल्लतल्ल बाँकी ६ महिनाका लागि ग्रेड टुङ्गो लागे, तर क्यानले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेन।
ग्रेड निर्धारण गुपचुप राख्न खोजे पनि बाहिरियो। त्यसपछि केही खेलाडीले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको आलोचना गरे। सुरुमै प्रश्न क्यानमाथि नै उठ्छ। ग्रेड सही र न्यायपूर्ण थियो भने सार्वजनिक किन गर्न सकिएन रु कसरी स्थिति यहाँसम्म,
पुग्यो कि आन्तरिक छलफलबिना कप्तानसहित चार खेलाडीले ग्रेडबारे मिडियामै गएर बोले। त्यसैलाई कारण देखाउँदै सुरु भएको स्पष्टीकरण प्रकरण अहिले प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको छ।
ज्ञानेन्द्र, सोमपाल, दीपेन्द्र र कमलले कात्तिक अन्तिम साता ग्रेडमा असन्तुष्टि जनाउँदै मिडियामा बोलेका थिए। सोमपालले आफूलाई ुबीुमा पारेर अन्याय गरेको बताएका थिए । सीुमा परेका कमल पनि सन्तुष्ट थिएनन्,
त्योभन्दा बढी उनी अन्य खेलाडीको ग्रेडबारे असन्तुष्ट थिए। ज्ञानेन्द्र र दीपेन्द्र ग्रेड एुमा थिए। यद्यपि, उनीहरूले ग्रेडमा केन्द्रित रहेर आलोचना गरेका थिए । खेलाडीले ग्रेडमा असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि क्यानले एक्सन थाल्यो।
क्यानले आफ्नो विरोध गरेको भन्दै चार खेलाडीसँग कात्तिक २५ मा स्पष्टीकरण नै सोध्यो। उनीहरूले कात्तिक ३० मा क्यानलाई जवाफ दिए। तर, क्यान सन्तुष्ट देखिएन। यो विवाद यतिकैमा मथ्थर भएन।
कप्तान मल्लसहित १९ खेलाडीले हस्ताक्षर गर्दै मंसिर ५ मा ११ बुँदे मागसहित सात दिनको समय दिँदै क्यानसँगै नै वर्गीकरणबारे स्पष्टीकरण सोधे । त्यसपछि विवाद झन् बढ्दै गयो। क्यानले फेरि मंसिर ८ मा तीन दिनको समय दिँदै खेलाडीसँग दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
दोस्रो पटकको स्पष्टीकरणमा पुरानै कुरा दोहोरिएको, चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको र क्यानले खेलाडीले बोर्डविरुद्ध बोलेको भन्दै कारबाही गर्ने बताएको थियो। क्यान र खेलाडीबीच विवाद चलिरहेको समयमा क्यान सदस्य छुम्बी लामा,
कप्तान मल्ललगायतका केही खेलाडीले राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई भेटेका थिए यसले पनि क्यान थप रुष्ट भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। क्यान विवादमा पर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। यस्तै विवादका कारण क्यानले करिब ४ वर्ष आइसिसीको प्रतिबन्ध खेपेको थियो।
पछिल्ला २ वर्ष क्यानको कार्यशैलीप्रति निकै असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। क्यानलाई नजिकबाट नियालिरहेकाको भनाइमा आफूविरुद्ध बोलेकै भरमा खेलाडीलाई करबाही गर्नु त्यति न्यायपूर्ण होइन।
क्यानले आफ्नो कार्यको समीक्षा गर्दै खेलाडी किन यो अवस्थामा पुगे भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। खेलाडीले पनि आफ्नो अभिभावक संस्थाको विषयमा मिडियामा गएर बोल्नुको सट्टा अन्तरिक छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुने कतिपयको तर्क छ।
यसबाट दुवै पक्षले पाठ सिक्दै आआफ्नो कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ता कि आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिउन। खेलाडी र क्यानबीच यस्तै विवाद बढ्दै जाने हो भने नेपाली क्रिकेटले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसले फेरि क्यान निलम्बनमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।खेलाडीमा मनोवैज्ञानिक दबाब नेपालले अबको केही महिनापछि आइसिसी विश्वककप ग्लोबल छनोट खेल्दैछ। यति ठूलो प्रतियोगिताअघि प्रमुख खेलाडीमाथि कारवाही हुँदा यसले अन्य खेलाडीमा पनि मनोवैज्ञानिक दबाब पार्ने खेल जानकारको भनाइ छ।
युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने पहिलोपटक सिनियर राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हाल्दै छन् यसले उनीमाथि झन् मनोवैज्ञानिक दबाब पार्नेछ।उनले पछिल्लोपटक एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा काठमाडौं किङ्ग्स ११ को कप्तानी गरेका थिए तर टोलीको प्रदर्शन भने राम्रो हुन सकेन।
सन्दीपसँग खेल अनुभवको कुनै कमी छैन तर उनले यति ठूलो प्रतियोगितामा कप्तानी गर्नु पर्दाको दबाबलाई झेल्न सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो त समयले नै बताउला। ठूलो प्रतियोगिताको मुखैमा यसरी कप्तान फेरिँदा त्यसको असर टोलीको प्रदर्शनमा पर्ने देखिन्छ।